Raharaha Ernest Obama: "Amougou Belinga dia tsy maintsy masiaka sy tsara fanahy", hoy i Dieudonné Essomba - TELES RELAY
TOEKARENATHE UNESFAMPIANARANA PRESS
Ahoana ny manararaotra ny hozatra Dakar Petrosen hanararaotra ny oram-drivotra ...
Mino izy fa amin'ny fomba toy izany ihany no hiarovan'ny mpandraharaha ny orinasany amin'ny fikasana maloto.
Marobe ny fihetsik'ireo voasambotra ny mpanao gazety Ernest Obama. Ny tale jeneralin'ny fahitana teo aloha, 4, naterin'ny tompon'ity fantsona ity, Jean Pierre Amougou Belinga, ho fanitsakitsahana ny fahatokisan-tena sy ny fanodikodinana.
Taminà forum malalaka natolotry ny 23 jona 2020, Dieudonne Essomba mihetsika an-tsitrapo amin'ny maha mpisolovava ny mpisoloky. «Amougou Belinga, hoy izy, nanangana vondrona ara-toekarena mahery vaika, L'Anecdote, ao anaty tontolo ara-toekarena sy sosiolojia iray tena ratsy. Ho fanampin'ireo fampahalalam-baovao, izay tsy manam-pahalalàna hatrany, misy ny vatosoa amin'ny Fitantanam-bola, ny fampianarana ambony, sns. Ny tanjany iraisam-pirenena dia manome ny endriny tena izy izay antsoina hoe "tompon-tanindrazana".
Taorian'ny fampatsiahivana ny zava-misy nolazaina hanoherana ny mpiara-miasa amintsika, ny toekarena, consultant amin'ny "Club d'Elites", ny seho ny alahady noforonin'i Ernest Obama, dia manoro hevitra an'Atoa Amougou Belinga intransigence.
"Ny olona voahodidin'ny zava-tsarotra toy izany dia tsy maintsy ho mailo sy tsy be fisainana, satria eto amin'ity tontolo masiaka ity izay tsy misy afa-tsy ny ratsy fanahy, tsy misy toerana misy famindram-po!" Ary AMOUGOU BELINGA dia tsy maintsy masiaka, satria io no fepetra tokony hananany mivelona ho mpandraharaha ary amin'ny maha-mpanome asa sy vola miditra ny tokantrano tokana. Raha mamela ny tenany ho malemy sy tsy maitao izy, dia hanao loza izy ary raha io tarehin-javatra io ihany no hanimba ny tokantrano an'arivony miankina aminy ”, hoy ny nosoratan'i Dieudonné Essomba.
Na izany aza, nahafeno ny fanamarihany tamin'ny fanambarany ny faniriana ho famaranana mahafinaritra ho an'i Ernest Obama. «Na iza na iza nilaza taminao fa mihomehy izahay an'arivony mandainga aminao! Ny trangan'ny OBAMA dia mampahory antsika ary mirary soa ho azy ireo izahay amin'ny fotoana sisa. Manantena ihany koa izahay fa ny fiandrianany AMOUGOU BELINGA dia afaka manamaivana ny fijaliany, araka izay azo atao sy ho tombontsoan'ny vondrona ”.
Ity ny lahatsoratra nosoratan'i Dieudonné Essomba:
Mikasika ny fisamborana an'i Obama Ernest
Ny hatezerany tamin'i Andriamaama izay nitaiza azy tamin-janany, izay notohizany tahaka ny vorona zaza ary izay nankininy ny iraka rehetra faran'izay kanto dia niseho nanomboka teo. Ary tsy izany rehetra izany, na dia teo aza ny ahiahy ny fanodinkodinam-bola, dia tsy noheveriny fa hanao fihetsika matanjaka toa ny mety ho nataon'ny mpandraharaha rehetra izy, ary araka ny takian'ny fitantanana mahomby, manenjika azy hiditra amin'ny volan'ny orinasa. Nankatò ny rainy ara-boajanahary izy, fa nomeny fotoana kokoa hialana amin'ny alàlan'ny fanendrena azy ho talen'ny asa an-gazety.
Inona no tanjona nokendren'ny OBAMA tamin'ny fitaovany adala hifanerasera amin'ny fahavalon'ny vondrona? Fandrahonana? Maniry valifaty? Fa inona no valifaty?
Amin'ity ambaratonga fandraharahana ity dia zavatra izay tsy azo atao! Tsy atahorana ho tandindomin-doza ny andiany iray miaraka amin'ireo mpiasa 1000 manana tsimatimanota, ary indrindra any Cameroon izay nanjary lasa fiainana sy fahafatesana ny asa!
Ny fisamborana an'Andriamatoa OBAMA avy amin'ny fahitana 4 dia naneho valiny maro, izay nohamafisina niaraka tamin'ny fampiatoana ny fandaharana CLUB DES ELITES tamin'ity alahady ity. Ho an'ny olona tso-po indrindra dia diso fanantenana izay mitranga amin'ity mpanao gazety mahay ity. Ho an'ny sasany, hafaliana tsy mahasalama ny fianjeran'ireo foko tribonista iray, fifaliana mihatsaravelatsihy miharihary ao ambadiky ny fanamelohana ho fanitsakitsahana ny zon'ny voampanga.
Tokony holazaina mazava tsara izany: tsy nosamborina i Obama noho ny heviny na ny heviny manoloana ireo Tribal Packs isan-karazany. Ny fisamborana azy dia tsy misy ifandraisany amin'ireo kabary mahery vaika nataony ho fanoherana adala iray izay nilaza fa naka fahefana tamin'ny toby foko ary tsy natahotra ny hamongotra ireo masoivoho ary hamely ny Lohan'ny an'ny Fanjakana any Eropa.
Mazava ny anton'ny fisamborana: asa fitantanana, izay misy ifandraisany amin'ny tsy fahatongavana mifandray amin'ny fahatokisana napetraky ny Tale Jeneraly.
Ny hoe ireo mpiaro ny zon'olombelona ireo dia tsy mahita fotoana hilalaovana ny lalao tiany indrindra, dia ny famonoana ny Majesty AMOUGOU BELINGA, izay meloka eo imason'izy ireo amin'ny heloka bevava mahatsiravina: manaporofo fa mety ny mpandraharaha dia avy amin'ny fokonolona rehetra, anisan'izany ny foko "kamo sy mpalavorary".
AMOUGOU BELINGA dia nanangana vondrona ara-toekarena matanjaka, ny ANECDOTE, ao anaty tontolo iainana ara-toekarena sy sosiolojia. Ho fanampin'ireo fampahalalam-baovao, izay tsy manam-pahalalàna hatrany, misy ny vatosoa amin'ny Fitantanam-bola, ny fampianarana ambony, sns. Ny herin'ny sehatra iraisam-pirenena dia manome ny tena sary marina ilay antsoina hoe "tompon-daka eo amin'ny firenena".
Ilay mpandraharaha ihany koa dia nijoro tamin'ny fihetsiny, izay miala amin'ny endrik'i Epinal, izay miraikitra amin'ireo mpandraharaha ara-toekarena. Malaza ho ketrina izy ireo, ny fitiavan-tena, ny tsy fahatokisan-tena ary ny karama tsy omena ny mpiasa ao aminy, matetika ireo rahalahiny ara-poko izay ataon'izy ireo miasa toy ny borikin'ny mpihaza.
Mifanohitra amin'izany, ny AMOUGOU BELINGA dia nidina niaraka tamin'ny karama lehibe tamin'ny toe-piainana mendrika, samy nosasaina tamim-pahalalahan-tanana lehibe sy fandraisana anjara mavitrika amin'ny asa soa sy asa sivika maro, toy ity fanampiana farany ity manomboka amin'ny 50 tapitrisa mankany amin'ny Eveka KLEDA noho ny fitsaboana an'i Coronavirus.
Ny fahombiazany mahavariana sy tsy ampoizina dia tsy mahasarika ny namana fotsiny, ny mifanohitra amin'izany! Ao anatin'ny tontolo iainana feno olona ratsy fanahy sy ratsy fanahy, ireo fifandonana ireo dia manaitra ny fankahalana, ny fialonana sy ny lolom-po. Ny fahavalon'ny AMOUGOU BELINGA dia avy any amin'ny toerana rehetra! Jealous, mpifaninana, fianakaviana, foko, foko hafa, namana, sns.
Ny olona sasany dia tsy mino ny mason'izy ireo manoloana izany fahombiazana mahavariana izany ary manandrana mafy ny hanazava izany amin'ny fiheverana bebe kokoa na tsia: ity asa ity dia aleon'ny Ministra toa izao, na ho avy amin'ny varotra, sns.
Na izany na tsy izany dia te hahita tselatra ao anaty pao ireo fahavalo ireo, fitaovana iray mipetraka amin'ny fasika, ary mety hianjera amin'ny fotoana rehetra. Noho izany, ny fiandrasan'izy ireo ny fanantenana hoe "vaovao" ho azy ireo: nianjera AMOUGOU BELINGA!
Mety hiandry ela izy ireo. Fotoana ela !
Manoloana izany, te-hanome toro-hevitra avy amin'ny mpahay toekarena amin'ny fiandrianany aho AMOUGOU BELINGA: izy sy ny vondrona ANECDOTE izay naoriny tamim-paharetana dia mivoatra ao anaty tontolo iray masiaka sy ratsy indrindra, izay tsy mandefitra. Tontolo Darwinian nanao herisetra, izay ahatanjahana ny mahery indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Ny olona voahodidin'ny zava-tsarotra toy izany dia tsy maintsy ho mailo ary tsy hakingan-tsaina, satria eto amin'ity tontolo masiaka ity izay tsy misy afa-tsy ny ratsy fanahy, tsy misy toerana misy famindram-po!
Ary AMOUGOU BELINGA dia tsy maintsy masiaka, satria io no fepetra tokony hananany mivelona ho mpandraharaha ary amin'ny maha-mpanome asa sy vola miditra ny tokantrano tokana.
Raha mamela ny tenany ho lasa malemy sy tsy mailo izy, dia hanao loza izy ary raha io tarehin-javatra io ihany no hanimba ny tokantrano an'arivony izay miankina aminy.
Raha ny marina dia tsy fandraisana andraikitra! Eny, AMOUGOU BELINGA dia tsy ho tompon'andraikitra tanteraka raha, amin'ny alàlan'ny tsy fankasitrahany, ny tsy fahalalany ary ny fandeferany, dia noforonin'ny fahavalony izy ary indrisy tamim-pahavoazana noho ny fihetsik'izy ireo tamin'ny heloka bevava, ka nametraka ny tsy fananana asa ratsy amin'ny fianakaviana arivo izay miankina amin'ny fianakaviana izy!
Tsy mitranga izany ary any amin'ny faritra hafa eran'izao dia mandoa zavatra lehibe kokoa noho ny fonja!
Na iza na iza nilaza taminao fa mihomehy izahay an'arivony mandainga aminao!
Ny trangan'ny OBAMA dia mampahory antsika ary mirary soa ho azy ireo izahay amin'ny fotoana sisa. Manantena ihany koa izahay fa ny fiandrianan'ny AMOUGOU BELINGA dia afaka manamaivana ny fijaliany, araka izay azo atao sy ho tombontsoan'ny vondrona.
Raha mampahatsiahy ny rehetra fa tsy misy dikany ny fahatongavan-dalao hilalao olon-kendry ary hanao famadihana kely miaraka amin'ny FCFA amina an'arivony maro sy amin'ny asa an'arivony, ao anatin'ny tontolo masiaka sy toy izany koa mahafaty noho ny Kamerona!
loharanom-baovao: http: //www.cameroon-info.net/article/cameroun-affaire-ernest-obama-dieudonne-essomba-economiste-pense-quamougou-belinga-doit-etre-impitoyable-et-375684.html
Ahoana ny manararaotra ny hozatra Dakar Petrosen hanararaotra ny oram-baratra sy solika - Young ...